"स्ववियु वास्तविक विद्यार्थीका लागि हो, काकाहरु स्थानीय चुनावमा जानुपर्छ"- नरेन्द्र न्यौपाने - Asian Samachar
Wednesday 28th , June 2017 | बुधबार, असार १४, २०७४
“स्ववियु वास्तविक विद्यार्थीका लागि हो, काकाहरु स्थानीय चुनावमा जानुपर्छ”- नरेन्द्र न्यौपाने
Asian Samachar शुक्रबार, पुस २२, २०७३ (6 months ago) अन्तर्वार्ता
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले केही दिनअघि २८ वर्षीय उमेर हद र मिश्रित प्रणालीका आधारमा स्ववियु चुनावको बाटो फुकाइदिएको छ । यो संगै क्याम्पसहरुमा विद्यार्थी राजनीतिमा आवद्ध केही नेताहरुले त्रि.वि. को यस निणयप्रति आपत्ति प्रकट समेत गरेका छन् । २८ बर्ष उमेर पार गरिसकेका नेताहरुले उठाइरहेको विषय स्ववियु निर्वाचन प्रणाली, अखिल क्रान्तिकारीको आन्तरिक जीवन, शिक्षा पद्धति र विद्यार्थी आन्दोलन लगायतका समसामयीक विषयमा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेसंग एसियन समाचारका लागि नरेश न्यौपानेले गरेको संक्षिप्त कुराकानी –
त्रि.वि.ले स्ववियु निर्वाचनका लागि तय गर्ने कार्यतालिकाबारे केही छलफल भएको छ ?
निर्वाचन कार्यतालिकाबारे छलफल गर्न हिजो मात्रै हामी सवै विद्यार्थी संगठनहरु बस्यौं, सबैको प्रतिक्रिया सकरात्मक छ । लामो समयपछि स्ववियु निर्वाचनको बाटो खुलेको छ । ०६५ को स्ववियु निर्वाचन पछि विद्यार्थी संगठनहरुवीच स्ववियु चुनावको पद्धती कस्तो अपनाउने भन्नेबारे वहस र विमर्श भए । त्यतिवेला हामी क्रान्तीकारीहरु अबको स्ववियु पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ र उमेरहद कायम गरिनुपर्छ भन्नेमा थियौं । अरु संगठनसंगको अन्तरक्रियामा हामी एकपटकका लागि उमेरहद कायम नगरेरै भएपनि स्ववियु निर्वाचन गर्ने भन्ने एक प्रकारको सहमतिमा पनि पुग्यौं । तर ढिलै भएपनि उमेरहद लगाएर मात्रै निर्वाचन गराउने तत्कालिन नेतृत्वहरुको सहमतिमा तयार पारिएको नियमावली बमोजिम कार्यतालिका आउँछ र अव चुनाव हुन्छ ।
बास्तवमा अब हुने भनिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट स्ववियु, विद्यार्थी र क्याम्पस कसरी लाभान्वित हुन्छ ?
हामीले उठाउँदै आएको पूर्ण समानुपातिक ढंगले स्ववियु निर्वाचन गर्ने कुरामा अरु संगठनहरु सहमत हुन नसकेपछि सवै संगठनको समझदारीमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो । यसमा अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष प्रत्यक्ष तथा वाँकी पदाधिकारी निर्वाचितहरुको मतदानबाट निर्वाचित गरिने र सबै पदाधिकारीहरु २८ बर्ष मुनिकै हुने भएकाले पनि अब स्ववियु पारदर्शी हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । २८ बर्ष मुनिको क्याम्पसको विद्यार्थी नेतृत्व ब्यवशायीक साेंचमा पुगि नसकेको हुनाले वास्तविक विद्यार्थीको हितमा केन्द्रीत रहन्छ । किनकी सबै संगठनको प्रतिनिधित्व हुने, कुनै एक विद्यार्थी संगठनको एकल पकड नरहने र वास्तविक विद्यार्थीको नेतृत्व हुने भएकाले पनि अब स्ववियु ठेकेदारी शैलीबाट जाने छैन ।
ग्राउण्ड कमजोर भएका कारण ८ वर्ष देखि अखिल क्रान्तिकारीले नै स्ववियु निर्वाचन रोकेको आरोप तपाईहरुमाथि छ नि ?
ग्राउण्ड कमजोर या मजबुत निर्वाचनले देखाउँछ । हामी ०६९ सालमै स्ववियु निर्वाचनमा केन्द्रीत भएर लाग्यौं तर त्यतिवेला केन्द्रीय क्याम्पस किर्तिपुर र आर.आर क्याम्पसमा एमाले अखिलले तालावन्दी गर्यो । त्यसो गरिदा मुल दुई क्याम्पस वाहेक अन्त चुनाव हुने तर महत्वपूर्ण दुई क्याम्पसमा चुनाव नहुने भएपछि चुनावको अर्थ रहेन । त्यसको असर अन्य क्याम्पसमा पनि परिहाल्यो फलस्वरुप चुनाव हुन सकेन । पछिल्लो पटक फेरि कहिले फागुन १४, कहिले चैत्र १४ र कहिले वैसाख १४ मा चुनाव गराउने कुरा उठे तर छलफल गर्दै जाँदा २०७२ साल पनि निर्वाचनका लागि अनुकुल हुन सकेन ।
०७२ पछि उमेर लगाईने कुरा स्ववियु नियमावलीमै व्यवस्था गरियो अव यो अवस्थामा वनेको कानुन सवैका लागि मान्य हुनुपर्छ । यसकारण हिजो राजतन्त्रको छहारीमा प्रजातन्त्र हुर्किन्छ भन्ने पार्टीहरुले गणतन्त्रको पक्षमा अहिले वकालत गर्नुपरे जस्तै हामीले ल्याएको समावेशी स्ववियु एजेण्डामा अन्य संगठन पनि आइपुगेका छन् । हिजो २०४७ सालकै संविधानमा ‘कमा र फुलस्टप’ परिवर्तन गर्नुहुदैन भन्ने राजनीतिक पार्टीहरु आज कसरी समावेशीता, संघियता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता हामीले ल्याएको हो भन्छन् ? हो, त्यसैगरि अन्य विद्यार्थी संगठनहरुले पनि हामीले ल्याएको एजेण्डालाई हाम्रो भन्दा हामी विरोध गर्दैनौ बरु झन् गौरव गर्छौ । हाम्रो एजेण्डाको अरुले स्वामित्व लिने कुराको विरोध होइन क्रान्तिकारी स्वागत गर्छौ ।
अर्को कुरा विद्यार्थी जीवनबाट रिटायर भइसकेकाहरुले २८ बर्ष उमेर हदको विरोध नगरि अव स्थानिय निकायको चुनाव हुन्छ त्यतातिर लाग्न अनुरोध छ । ४० बर्ष पार गरेका बुढा र अंंकलहरुले त संसदको चुनाव पो लड्ने हो त स्ववियु निर्वाचनमा र्याल चुहाउने हो र ? अहिले पनि केही काकाहरु विद्यार्थी हौं भन्दै जवर्जस्ती भिसीलाई कालोमोसो दल्ने, आन्दोलन गर्ने र तालावन्दी गर्ने कुरा गर्दैछन भन्ने कुरा सुन्दैछु यो सर्वथा गलत हो । अखिल क्रान्तिकारीले देशभर २८ बर्ष मुनिको विद्यार्थी नेतृत्वलाई चुनाव लडाउँछ , हामी त्यतातिर केन्द्रीत भइसक्यौं । वास्तविक विद्यार्थीहरुलाई स्ववियु चुनाव लड्न काकाहरुले अवरोध नगरुन् ।
अखिल क्रान्तिकारीको आन्तरिक जीवनमा इलेक्सनमा नगइ सेलेक्सनको विधिमा जानु भो चुनावको सामना गर्न अप्ठ्यारो भएर हो ?
यो डराएर वा सामना गर्न नसकेर होइन वास्तवमा हामीले लेनिनवादी संगठनात्मक प्रणालीकै आधारमा जनवादी केन्द्रीयता अपनाउदै आइरहेका छौं । हाम्रो नेतत्व निर्माणको शैली इलेक्सनभन्दा झन उत्कृष्ट छ भन्छु म । किनभने अहिलेको नेतृत्व शतप्रतिशत सहमतिका आधारमा चयन भएको छ । अब शतप्रतिशत सहमतिमै निर्विरोध नेतृत्व चयन हुन्छ भने निर्वाचनमै जानुपर्छ भन्ने हुँदैन । यद्यपि सहमति हुनै नसक्ने अवस्था हो भने हामीले निर्वाचनलाई अस्विकार गरेका पनि छैनौ । हामीले भर्खरै आर.आर लगायतका क्याम्पसमा निर्वाचन गर्यौ । रुकुम, वाँके लगायतका जिल्लामा पनि निर्वाचनबाटै नेतृत्व चयन गरिएको छ ।
वास्तवमा निर्वाचन प्रणाली एक हिसावले आधा संख्याले मात्रै पनि नेतृत्व लिन सक्ने प्रणाली हो । त्यसैले हाम्रो जोड निर्वाचन अस्विकार नगर्ने तर सकभर सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्ने कुरामा छ । यहि क्रममा यस पटक हामी पनि एक पटकलाई अन्तरसंगठनमा चुनाव गराउन लागेका छौं । चैत्र ३ गतेसम्म हुने हाम्रो संगठनको अवको राष्ट्रिय अधिवेशनमा चुनावबाट नेतृत्व चयन हुन्छ । यो विधि सहि देखिए पछि पनि अपनाउने र खराव देखिए फेरि पनि लेनिनवादी संगठनात्मक पद्धति अपनाउने हो ।
विद्यार्थी आन्दोलन सत्ताको एउटा अंश हो वा दबाव समुह के हो ?
वास्तवमा नेपालको सन्दर्भमा विद्यार्थी आन्दोलन वि.सं. १९९७ बाटै नियाल्ने हो भने ठुल्ठूला परिवर्तनको सुरुवात यसकै जगमा भएका छन् । आजको परिवेश निर्माणमा विद्यार्थी आन्दोलन र संगठनहरुकै महत्वपूर्ण भूमिका छ । त्यतिवेला विद्यार्थी संगठनहरुले पार्टीहरुले गर्ने काम गर्थे । तर आजको परिवेशमा पार्टीहरु नै त्रि.वि. का प्राध्यापक, सर्वोच्चका न्यायधिश, संवैधानिक अंगका प्रमुखहरु भागवण्डा गरिरहेका बेला विद्यार्थी आन्दोलन निष्क्रिय भइरहेको सत्य हो । त्यसकारण आज हाम्रो भूमिका केवल दबाव सृजना गर्ने भएको छ ।
मुलुकमा भएका ठुला ठूला आन्दोलनहरुले प्रजातन्त्र, वहुदल, गणतन्त्र ल्याए त्यसमा विद्यार्थीहरुको भूुमिका महत्वपूर्ण रह्यो । तर अब हामीले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई वैज्ञानिक, जनवादी र रोजगारमुलक वनाउने कुरामा राज्यसत्तालाई दबाव दिने र परिवर्तन गराउने हो । त्यसकारण राज्यसत्ताको आजको चरित्र जस्तो छ शिक्षा प्रणाली पनि त्यस्तै छ । हामीले भनेको जस्तो समाजवादी शिक्षा प्रणाली अवलम्वन गर्न सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठनको साझा एजेण्डा वनाउन जरुरी छ ।
जनवादी शिक्षाको वकालत गर्ने अखिल क्रान्तिकारी स्वयं वुर्जुवा शिक्षामा विलय भयो भन्छन् नि ?
विलय होइन खास कुरा के हो भने राज्यसत्ता र शिक्षाको अन्योन्याश्रित सम्वन्धले फरक पारेको हो । राज्यसत्ता भनेको टाउको हो । हामी जबसम्म टाउको पूर्णरुपमा परिवर्तन गर्न सक्दैनौ तबसम्म शिक्षा पनि चाहेजस्तो वनाउन सक्दैनौ । त्यसकारण के माओवादी आन्दोलनले पनि विजय हाँसिल गरेको हो त ? होइन नि हाम्रो आन्दोलनले विजयी हाँसिल गरेको भए पो हामीले भनेजस्तो जनवादी शिक्षा आउँथ्यो । त्यसैले जसरी माअ‍ोवादी आन्दोलन सम्झौतामा आइपुग्यो त्यसैगरि जनवादी शिक्षा प्रणाली पनि अगाडि वढाउन सकिएन । तर अन्तिम केन्द्रविन्दु त्यही हो ।
नेपालको शिक्षा प्रणाली विदेशीहरुको हित अनुकुल छ भन्ने छ, यसमा तपाई स्वयंको भोगाई र अनुभुती शेयर गर्न मिल्छ ?
शिक्षा मात्रै हो र ? नेपालमा जे भइराखेको छ । त्यो सबै विदेशीकै इशारामा भइरहेको भनिन्छ । हुन पनि कहिं न कहिं विदेशीहरुको ट्रायल मिलिराखेको जस्तो देखिन्छ । जस्तो नेपालमा सञ्चालन हुने केहि शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा विदेशीहरुको लगानी नै छ । जुन उनीहरुको इच्छा अनुरुप सञ्चालित हुन्छ । यद्यपि अहिलेको ग्लोबल इन्ट्रेष्टलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । जस्तो सेमेष्टर प्रणाली ग्लोबल पद्धतिका रुपमा आएको छ त्यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनु पर्यो, कतिपय पाठ्यक्रम अन्यत्रका अनुकरण होलान् हाम्रोमा म्याच नखालान् तिनलाई त्यसैगरि वुझ्नुपर्यो ।
मानौं कतिपय मुलुकलाई विद्युत उत्पादनका लागि आणविक उर्जा जरुरी छ । त्यहाँ आणविक क्षेत्रकालागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ला हामीकहाँ पानी छ हाइड्रो पावरमा दक्ष जनशक्ति वढी उत्पादन गर्नुपर्ला । आ–आफ्नो नेशनल रिसोर्स अनुसार जनशक्ति चाहिन्छ र त्यसैमा वढी जोड दिनुपर्छ ।
अन्तमा संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर सहकर्मी संगठनले थालेको आन्दोलनलाई कसरी लिनु भएको छ ?
मैले यसलाई साँच्चै भन्नुहुन्छ भने एउटा नाटकका रुपमा वुझेको छु । त्यसो भए के हामी आन्दोलन नगर्नेहरु राष्ट्रियता विरोधी हाैं र ? संविधान संशोधनको कुरा हाम्रो आन्तरिक मामिला हो । विदेशीको सरोकारको विषय होइन । तर मैले के वुझिरहेको छैन भने नेपालमा संघियता र धर्म निरपेक्षता भारतलाई भित्रदेखि मन नपर्नु, चीनले पनि कहिले काँही मन नपरेको जस्तो अभिव्यक्ति दिनु र एमाले काँग्रेसहरुलाई पनि भित्रभित्रै चित्त नबुझ्नु यो के भइराखेको हो ? त्यसकारण कुनै न कुनै मिलनविन्दुको खोजीमा उनीहरु छन् जस्तो मलाई लाग्छ । अस्ति भर्खरै मात्र वामदेव र काँग्रेसका केही नेताहरुले संघियता जरुरी छैन भन्ने वोलेको पनि सुनियो, त्यो परिवर्तन स्विकारमा समस्या हो । त्यसकारण यो आन्दोलनको कुनै तुक छैन ।
Related Posts किम इल सङसंग वाशिङटन टाइम्सका पत्रकारले लिएको महत्वपूर्ण अन्तरवार्ता
‘उपत्यकाका सबै क्याम्पसमा अखिलको झण्डा गाड्छौं’ – दिपेश प्रसाईं
अमेरिकाको कठपुतली बन्नु भारतका लागि विनाशकारी हुने चीनको चेतावनी बुधबार, असार १४, २०७४0responses
भेनेजोयलाको सर्वोच्च अदालतमा हवाइ आक्रमण , बुधबार, असार १४, २०७४0responses
तीन जना मेयरका उम्मेदवारले एउटै केन्द्रबाट मतदान गर्दै बुधबार, असार १४, २०७४0responses
युएन पार्कको जग्गामा दुरुपयोग: एनजिओको इन्स्टिच्युटदेखि खेतीपातीसम्म बुधबार, असार १४, २०७४0responses
तीन सय ३४ स्थानीय तहमा दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदै बुधबार, असार १४, २०७४0responses
सिक्किममा भारतीय सेनाको वंकरमाथि चिनियाँ आक्रमण, वंकरहरु ध्वस्त ह्रवात्तै घट्यो सुनको मूल्य एमाले कार्यकर्ताद्वारा चक्क़ु प्रहार गरि शिक्षक हत्याको प्रयास दाङ गोलीकाण्डको भित्रि रहस्य,रिपुमर्दन गणमा व्यापक असन्तुष्टी शुक्रबार ४:३० देखि अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बन्द रहने, यस्तो छ कारण वम विष्फोटमा मृत्यु भएका चन्द्रबहादुर सिंह बारे यस्तो छ नेकपा को आधिकारीक धारणा पेट्रोल बिक्रीबाट घाटा भएको भन्दै असार २० देखि पेट्रोल नबेच्ने ब्यवसायीको घोषणा दैवि शक्तिले सिंहासन फर्किहाल्छ भन्ने लाग्छ र पारस ज्यू ? बेइजिङ-साङ्घाई गुड्न थाल्यो हालसम्मकै द्रुत गतिको रेल पाल्पाका १८ वटा मतदानस्थल अतिसंवेदनशील अमेरिकाको कठपुतली बन्नु भारतका लागि विनाशकारी हुने चीनको चेतावनी बुधबार, असार १४, २०७४0responses
एसियन डेस्क, चीनले अमेरिका–भारत सम्बन्धबारे अहिलेसम्मकै खतरानाक चेतावनी दिएको छ । चीनको सरकारी अखवार... भेनेजोयलाको सर्वोच्च अदालतमा हवाइ आक्रमण , बुधबार, असार १४, २०७४0responses
काठमाडौं, भेनेजोयलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोले त्यहाँको सुप्रिम कोर्टमा हेलिकप्टरद्धारा प्रहरीले आक्रमण गरेको वताएका छन् ।... अछाममा अपरान्ह पछि श्रृङ्खलावद्ध बम विष्फोट, सेनालाई सास्ती मङ्लबार, असार १३, २०७४0responses
अछाम, मंगलबार अपरान्हदेखि अछामका विभिन्न स्थानमा श्रृङ्खलावद्ध बम विष्फोट भएका छन् । अपरान्ह साढे... पूर्वसचिव मैनाली प्रति निर्वाचन आयोग आक्रोसित मङ्लबार, असार १३, २०७४0responses
काठमाडौं, निर्वाचन आयोगले आयोगका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली प्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ । हिजो... वम विष्फोटमा मृत्यु भएका चन्द्रबहादुर सिंह बारे यस्तो छ नेकपा को आधिकारीक धारणा मङ्लबार, असार १३, २०७४0responses
काठमाडौं, सोमबार राती बम विष्फोटमा मृत्यु भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कैलाली जिल्ला सदस्य चन्द्रबहादुर सिंह... Our Facebook Page